August 2007 edited September 2008 in Dreamweaver
အကြိုက်ဆုံးကတော့ Spry ပဲဗျ... AJAX နည်းပညာလေ... အဲဒါသုံးလိုက်မှပဲ page က ပိုလန်ထွက်လာတယ်.. နောက်မှ သေသေချာချာရေးပေးတော့မယ်..
how can i improve my website to be better ????
pls tell me about with ajax
AJAX ကိုတော့ မာ့ခ်သုံးထားတာ လန်ထွက်နေတာပဲ..
http://em1.mmdictionary.net/lookup.htm အဲဒီမှာ ကြည့်ဗျာ..
ဟီး ajax ကတော့ဟုတ်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဒီဇိုင်းကတော့ မသိဘူးဗျ။ အနုပညာအခံ မရှိလို့လားတော့မသိဘူး။
anyway , လိုတာရှိရင်ပြောပါဗျာ။ လုပ်ပေးမှာပေါ့။
Dreamweaver CS3 ထဲမှာ Spry သုံးနည်းကို နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြကြပါလားခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်က ခုမှစတင် လေ့လာနေသူမို့ပါ။ အခြေခံလောက်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
Spry ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘာအတွက်အသုံးပြုတာလဲ။ ဘာတွေ အားသာချက်ရှိလဲ။
လက်ရှိ ဘယ်ဆိုဒ်တွေမှာ အဲနည်းပညာကို အသုံးပြုထားကြပါသလဲ။ စသည်ဖြင့်ပေါ့ ။
ကိုဖိုးချစ်ရေ ... ဟုတ်ပြီဗျာ ... များများမေးထား ... ဒါမှကျနော့်အတွက် မေးဖို့မလိုဘဲ များများသိရမှာ (ဟီး)
ကျနော်က အခုထိ Dreamwaver 8 ဘဲသုံးနေတုန်း။ 8 ကိုတောင် သုံးတတ်ရုံလေးလောက်ဘဲ။ ဆိုတော့ကာ ရှေ့ရောက်နေတဲ့ CS3 user တွေ ဘာအသစ်အသစ်တွေ တွေ့လဲ ရှဲ လုပ်ပေးကြပါဗျာ။
Photoshop နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ Button တွေ Menu ဘားတွေကို Dreamweaver မှာ ဘယ်လို
ခေါ်သုံးရသလဲ သိချင်လို့ပါ။ နောက်ပြီးတော့ Page အရွယ်အစားကို ဘယ်လောက်စံထားပြီး သတ်မှတ်
Phoe Chit wrote: »
Dreamweaver မှာ Insert Menu အောက်က Media -> Flash Button ဆိုတာရှိတယ်.. အဲဒါနဲ့ Button လှလှလေးတွေ ထည့်လို့ရတယ်..
page အရွယ်အစားကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ 1024 X 768 ကို စံထားပြီးတော့ သုံးနေကြတယ်ဗျ။
Photoshop မှာဆွဲထားတဲ့ Template တွေကို Slice Tool နဲ့ပိုင်း Save for Web -> Selected Slice ဆိုတာနဲ့ Save ပြီးရင် နေရာ အတိအကျမှတ်ပြီး div နဲ့ထည့်ပြီးသုံးရတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...Blog တွေတော်တော်များများ မှာ အစ်ကို ့နာမည် ကိ ုကြားဖူးနေပေမယ်. မတွေ ့ဖြစ်ဘူး.. အခု ဒီနေ့online မှာ လျှောက်သွားရင်း ဒီမှာ တွေ ့တာ...
အစ်ကို ့ရဲ့ "http://saturngod.mysteryzillion.com/"; က " Drupal" ကိုမြန်မာလို ဗျင်းထားတာ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ...ကျွန်တော် Drupal ကို လေ့လာနေတုန်းပါ.. မြန်မာလို လုပ်ချင်တာ အသည်းကို
ယားနေတာ..ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိလို့အချိန်တွေ အများကြီး ၀ဲ ပစ်လိုက်ရတယ်...
အဲဒီ မြန်မာလို Setting ကို ပြောပြပေးပါဗျာ.....အရမ်းကို လေးစားပါတယ်.....
ဇော်ဂျီထည့်တယ်ဆိုတာကတော့ အဓိက CSS ပဲဗျ။ သူ့မူရင်း template က CSS မှာ font တွေကို ဇော်ဂျီအကုန်ပြောင်းလိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ CSS မှာ font: , font-family: တို့စတာတွေမှာ font name လေးတွေ တွေ့ရင် ရှေ့မှာ Zawgyi-one ထည့်လိုက်တာပဲ။
font-family: Zawgyi-one,Arial , Verdana;
font: normal normal 100% Zawgyi-one, 'Lucida Grande','Trebuchet MS';
အဲလိုမျိုး ရှေ့မှာ Zawgyi-one ထည့်ပေးလိုက်တာပဲ....
ဒီနေ ့လက်နာနေလို့အလုပ်မဆင်းနိုင်တာနဲ ့အတော်ပဲ..
အခုပဲ Drupal Site ကနေ Aurora (3 column Template) ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး Theme ကို
change လိုက်တယ် . ထူးဆန်တာက CSS ကလည်း3column အတွက် မှန်တာပဲ..ဒါပေမယ့်
Web page မှာ2column ပဲ ပေါ်နေတယ်...
Dreamwaver CS3 ကိုဒီ တစ်ရက်နှစ်ရက် ကမှ စသုံးကြည့်မိတယ်...
အစက ဘာတွေမှန် မသိဘူး.. လျှောက်လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့မဆိုးပါဘူး Edit လုပ်ရတာ တော်တော်လေး
အခု2column ပဲ ပေါ်နေတာကို ရှင်းပြပေးပါဦး....
ကျွန်တော့်ရဲ ့ဆိုဒ် က http://johnboylay.key.or.kr ပါ.
3 column ပေါ်ပါတယ်... ကျွန်တော့်မှာ ပေါ်နေတယ်ဗျ..
Dreamwaver နဲ့template.php ကို ဖတ်ကြည့်ပြီး configure ပြန်လုပ်လိုက်တာ3column
Css ထဲမှာ အစ်ကိုပြောသလို font-family ကိုထည့်ပြီးပြီ
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ ရဲ့FCK Editor ထဲမှာ ဇော်ဂျီ ဖောင့် ကို ထည့်လို ့မရသေးဘူး..
online ကနေ ရှာတော့ရှာနေတာပဲ...
၁ နာရီခွဲလောက် လိုက်ရှာလိုက်တာ FCK Editor ထဲတော့ မြန်မာဖောင့် ရိုက်လို ့ရသွားပြီ...
ဒါပေမယ့် ဆိုဒ်မှာ မြန်မာဖောင့် မမြင်ရသေးဘူးဗျာ....
အစ်ကိုပြောသလို Template ထဲ က CSS တွေ အားလုံးထဲကို ဇော်ဂျီ တွေပစ်ထည့်လိုက်တာ...
ပြီးပါလေရော.. အကုန်တန်းစီ ထွက်လာတယ်.....
Dreamwaver CS3 နဲ ့မြန်မာ Web page တစ်ခုမှာ မြန်မာပြက္ခဒိန် RSS Feed ကိုဘယ်လို ထည့်ရပါသလဲ ခင်ဗျာ...ဒီ blog (http://kowunnako.blogspot.com/)တစ်ခုမှာ မြန်မာပြက္ခဒိန် ကို Blog နဲ ့တွဲ တာကို ရှင်ပြထားပေမယ့်
html နဲ ့ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ နားမလည် ဘူး.....
HTML နဲ့ RSS ကိုဖတ်လို့မရဘူးထင်တာပဲ...
PHP , ASP , JSP လိုမျိုး web programming တွေမှာပဲ RSS ကိုဖတ်လို့ရတာတွေ့ပါတယ်...
HTML လိုမျိုး simple မှာဖတ်မရဘူးဗျ
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Dreamweaver အခြေခံ စာအုပ်လေးရေးပေးနိုင်မလား။ ကျွန်တော်ကျောင်းမှာ သိပ်မသင်ခဲ့ရဘူး။ ကြားရုံပဲကြားလိုက်တယ်။ လုံး၀ကိုသုံးမတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခုကျွန်တော်က Webpage ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီးလေ့လာနေတယ် Dreamweaver CS3 trail version တော့ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချထားပြီးပြီ ဘာမှကို မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အော်တို Template တွေလည်းယူ လို့မရဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော် အခု CSS ရေးနေတာတောင် နားထားရတယ်ဗျာ... မအားဘူးဖြစ်နေလို့... ကျွန်တော်အားရင်တော့ ရေးပေးတာပေါ့... အခုက မအားလို့ပါ... ဒါပေမယ့် ebook ဖတ်ချင်
မြန်မာလိုကတော့ ကြာအုံးမယ်ဗျ... ဒီ April လမှာ dictionary အကြမ်းလေး ပြီးချင်လို့...
Dreamwaver စာအုပ်လေးတော့ တစ်ကယ်ဖတ်ချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မြန်မြန်လေး ရေးပေးစေချင်တယ်။ ညီလေးလုပ်ငန်းတွေ အားမှဆိိုလို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ အားလာမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ညီတို့က ဆက်တိုက်အားသွန်လုပ်နေတာဆိုတော့။ ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်ယောက်ကို ရေးခို်င်းတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
NayGyi wrote: »
Dreamwaver CS3 trial version download ရတယ်ဆိုလို ့... ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာတော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ...rapidshare က download ဆွဲတာလဲမရဘူး...
tril link လေးများရှိရင် ပေးကြပါလားဗျာ........
လိုအပ်တဲ့ software ကို forum အောက်က file request ကနေ တောင်းခံနိုင်ပါတယ်..
I think it maketh ur page intoalarge file size.
As for me, I always use CSS stylesheet and use bg imgz.
This one maketh ur page intoasmall file size.
Moreover, i'd never used slice tool. as for me, i always crop in the formal way with marquee tool.